Ngathi-I-VALES & HILLS Biomedical Tech. Ltd.
I-Vales kunye ne-Hills Biomedical Tech. I-Ltd (V&H), ebekwe kwi-BDA International Park, e-BEIJING, ibingomnye wabaphuhlisi abaphambili be-PC esekwe kwitekhnoloji ye-ECG ngaphezulu kweminyaka engama-20. I-V & H igcina inika izibonelelo ezinkulu zokufikelela kumda oza nembono yokulula kokuyilekileyo kuyilo lweemveliso kunye noqeqesho lolawulo kulawulo lomgangatho. I-V & H isebenza ikakhulu kwizixhobo ze-wireless ecg zezicelo ze-iOS, iPC-ECG, i-ECG Workstation, uVavanyo loXinzelelo lwe-ECG, iDigital EEG Series kunye ne-Ambulatory Blood Pressure Monitor.
Ingcamango ye-V & H ingumsebenzi weqela apho sakha iqela eliyinyani, elikhulelwe ngentsebenziswano, elizinikele kwisindululo sokuba sonke esisebenza nabo sisebenzela iintliziyo zethu ekufezekiseni injongo yokuvuza abantu kunye noluntu. I-V & H ihlala ijonge kwikamva ngethemba kwaye ukuzimisela.
I-Vales kunye ne-Hills Biomedical Tech. Ltd ngumboneleli wehlabathi ophambili kwimveliso ye-electrocardiograph (ECG) kunye neenkonzo zewebhu ze-ECG zezicelo zeklinikhi. Ngaphezulu kweminyaka eli-10, besisenza umgca opheleleyo wemveliso yeCardioView egubungela i-ECG ephathekayo (i-IOS kunye ne-Android), iPC-ECG, i-ECG Workstation, iHolter, i-ABPM, i-ECG Network kunye ne-ECG Cloud Service.
EMazantsi mpuma Asiya
Isigidi esi-1 sezigidi
1, Iinketho ezininzi zinokuchongwa kwizixhobo.
2, Ukurola kwi-Intanethi kunye neengcali ziyaxhasa.
I-3, i-CE, i-ISO, i-FDA kunye ne-CO njalo zinokubonelelwa kubathengi bethu.
4, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokhuphiswano
Ⅱ. inkonzo yasemva kwentengiso:
1, isiqinisekiso sonyaka omnye seeyunithi ezipheleleyo
2, nikezela ngolawulo lwenkonzo ekude nge-Intanethi ukuba ufuna ngalo naliphi na ixesha
3, thumela ngaphandle kwiintsuku ezi-3 ngaphambi kokufika kwentlawulo
Singomnye wabaphuhlisi abaphambili be-PC esekwe kwitekhnoloji ye-ECG iminyaka. I-V & H igcina inika izibonelelo ezinkulu zokufikelela kumda oza nembono yokulula kokuyilekileyo kuyilo lweemveliso kunye noqeqesho lolawulo kulawulo lomgangatho. I-V & H isebenza kakhulu kwi-PC-ECG, ECG Workstation, kuvavanyo loxinzelelo lwe-ECG, kwiDigital EEG Series nakwi-Ambulatory Blood Pressure Monitor.
Umgangatho: EN ISO: 13485
Inombolo: SX60148889 0001
Umhla wokukhutshwa: 2020-04-27
Umhla wokuphelelwa: 2020-10-16
Ubume / uLuhlu: Inkqubo yokufunyanwa kwe-ECG, iHolter ECG, iNkqubo yokuFumana i-EEG, iiMonitor ezinamandla zeHaemodynamic
Ikhutshwe ngu: TÜV Rheinland
Inombolo: DD60138018 0001
Umhla wokukhutshwa: 2019-04-17
Umhla wokuphelelwa: 2024-04-17
Ubume / Uluhlu: Inkqubo yokufunyanwa kweECG kunye neHolter ECG
Umhla wokukhutshwa: 2017-12-15
Ubume / Uluhlu: Inkqubo yokufunyanwa kweECG
Ikhutshwe ngu: USA FDA
Umhla wokukhutshwa: 2013-11-26
Ubume / uLuhlu: Inkqubo yoVavanyo lweHolter yeCV3000